Bit By Bit - Ethics - 6.7.1 I IRB kuyinto floor, hhayi ophahleni
Abacwaningi abaningi kubonakala sengathi banombono ophikisanayo we-IRB. Ngakolunye uhlangothi, bayibheka njengesihlalo sobukhosi. Noma kunjalo, ngesikhathi esifanayo, futhi bayabheka ukuthi uyisinqumo sokugcina sezinqumo zokuziphatha. Okungukuthi, abacwaningi abaningi bakholelwa ukuthi uma i-IRB ivuma, kufanele kube sekulungile. Uma sivuma ukulinganiselwa kwangempela kwe-IRB njengamanje okwamanje-futhi kukhona eziningi zazo (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) -ngabe thina njengabacwaningi kumele sithwale umthwalo owengeziwe ngenxa yokuziphatha kocwaningo lwethu. I-IRB iphansi hhayi umgwaqo, futhi lo mbono unemiphumela emibili eyinhloko.
Okokuqala, i -IRB iphansi kusho ukuthi uma usebenza esikhungweni esidinga ukubuyekezwa kwe-IRB, kufanele ulandele leyo mithetho. Lokhu kungabonakala kusobala, kodwa ngiye ngaphawula ukuthi abanye abantu babonakala befuna ukugwema i-IRB. Eqinisweni, uma usebenza ezindaweni ezingasebenzi, i-IRB ingaba umlingani onamandla. Uma ulandela imithetho yabo, kufanele bahlale ngemuva kwakho kufanele kube khona into engalungile ngokucwaninga kwakho (King and Sands 2015) . Futhi uma ungahambisani nemithetho yabo, ungagcina uwedwa ngokwakho esimweni esinzima kakhulu.
Okwesibili, i -IRB ayilona ugwadule kusho ukuthi ukugcwalisa amafomu akho kuphela nokulandela imithetho akwanele. Ezimweni eziningi wena njengomcwaningi nguye owazi kakhulu ukuthi ungenza kanjani ngokuziphatha. Ekugcineni, ungumphenyi, futhi umthwalo wemfanelo wokuziphatha ukhona kuwe; igama lakho ephepheni.
Enye indlela yokuqinisekisa ukuthi uyaphatha i-IRB njengesihlabathi hhayi isilondolozi ukufaka isithasiselo sokuziphatha emaphepha akho. Eqinisweni, ungabhala isithasiselo sakho sokuziphatha ngaphambi kokutadisha kwakho kuqala, ukuze uziphoqe ucabange ukuthi uzochaza kanjani umsebenzi wakho kubontanga bakho kanye nomphakathi. Uma uzithola ungakhululekile ngenkathi ubhala isithasiselo sakho sokuziphatha, khona-ke ukutadisha kwakho kungase kungabonakali ibhalansi efanele yokuziphatha. Ngaphandle kokukusiza ukuba uhlolisise umsebenzi wakho, ukushicilela izithasiselo zakho zokuziphatha kuzosiza umphakathi wocwaningo uxoxisane ngezinkinga zokuziphatha futhi ubeke imigomo efanelekile esekelwe kwizibonelo ezivela ocwaningweni lwangempela lobuciko. Ithebula 6.3 linikeza amaphepha okucwaninga amathekisthi engicabanga ukuthi anezingxoxo ezinhle zokuziphatha kocwaningo. Angivumelani nazo zonke izicelo zabalobi kulezi zingxoxo, kodwa zonke izibonelo zabacwaningi abenza ngobuqotho ngomqondo ochazwe Carter (1996) : esimweni ngasinye, (1) abacwaningi banquma ukuthi bacabanga ukuthi kunjani futhi yini engalungile; (2) benza ngokusekelwe kulokho abakwenzile, ngisho nasezindleko zabo; futhi (3) zibonisa obala ukuthi zenza ngokusekelwe ekuhlaziyweni kwazo kokuziphatha kwalesi simo.
Ithebula 6.3: Amaphepha anezingxoxo ezithakazelisayo zokuziphatha kocwaningo lwabo
Ukukhishwa okukhulunywe ngakho
Rijt et al. (2014) Ukuhlolwa kwendawo ngaphandle kwemvume
Gwema ukulimala komongo
Paluck and Green (2009) Ukuhlolwa kwensimu ezweni elithuthukayo
Ucwaningo ngesihloko esibucayi
Izinkinga ezivumelanisiwe zokuvuma
Ukulungiswa kwezingozi ezikhona
Burnett and Feamster (2015) Ucwaningo ngaphandle kwemvume
Ukulinganisela izingozi nezinzuzo uma izingozi kunzima ukulinganisa
Chaabane et al. (2014) Imiphumela yomphakathi yocwaningo
Ukusebenzisa amafayela wedatha ahambile
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Ukuhlolwa kwendawo ngaphandle kwemvume
Soeller et al. (2016) Imibandela yesevisi ephuliwe